अन्तत : MCC केपि ओलिको हार जिते भिम रावलको अडान …हेर्नुहोस! सक्दो शेयर गर्नुस् |::Point Nepal
अन्तत : MCC केपि ओलिको हार जिते भिम रावलको अडान …हेर्नुहोस! सक्दो शेयर गर्नुस् |
काठमाडौं : क,म्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सह,योगको मि,लेनियम च्या,लेन्ज कर्पाे,रेसन (एमसीसी) स,म्झौता परि,मार्जन गर्न राजी भएका छन् । प्रति,निधि सभाबाट स,म्झौता अ,नुमोदनका लागि हतारिरहेका ओली अन्ततः परिमा,र्जनका स,म्बन्धमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्न तयार भएका छन् ।
पा,र्टीभित्र ब,हुसं,ख्यक नेताहरू एमसीसी अ,नुदान सम्झौ,ता परिमा,र्जन गरेर का,र्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको र पछिल्लो के,न्द्रीय समिति बैठकले यस सम्ब,न्धमा अध्ययन गर्न बनाएको का,र्यदलले समेत परिमार्जन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सु,झाव दिएपछि ओली ल,चक बनेका जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा का,र्यदल संयो,जकसमेत रहेका वरि,ष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्ययनका निष्क,र्षबारे बिफ्रिङ गरे । यथास्थि,तिमा स,म्झौता अनु*मोदन गरेमा देशको स्वा,धीनता र सा,र्वभौमि*कतामाथि आँच आउने भन्दै परिमार्ज,नमा जानुपर्ने कार्यदलको नि,ष्कर्ष उनने सुनाएका थिए । खनालले सम्झौताका रा, ष्ट्रहीत विप,रीतका बुँ,दाबारे पनि ब्रि,फिङ गरेका थिए ।
का,र्यदलका संयोजकले सम्झौतामा रहेका आ,पत्तिज,,नक विषयबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । अब यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘यसबारे अर्काे बैठकबाट निर्ण,य लिइने छ । नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता खनालको सं,योजक,त्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको का,र्यदल बनाएको थियो । नेता रावलले एमसीसीभित्र भएका अ,समान र रा,ष्ट्रघा,ती प्रा,वधानबारे सा,र्वजनिक गर्दै आएका थिए ।
कार्यदलले २० दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा मूल स,म्झौता गर्दा त्यसभित्र अ,र्थ मन्त्रालयले अन्य थप १४ वटा भित्री सम्झौ,ता गरेको र त्यसमा त्रु,टिपू,र्ण प्रा,वधान भेटिएको प्र,तिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । भित्री स,म्झौता अ,र्थ मन्त्रालयले पररा,ष्ट्रलाई समेत जानकारी नदिई गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भित्री स,म्झौताका केही ठाउँमा सम्झौ,ता नेपालको का,नूनसँग बा,झिएमा ‘न्युयोर्क स्टेट’को कानून हाबी हुने गरी गरिएको समेत आफूहरुले भेटेकाले सम्झौताका केही बुँ,दामा परिमा,र्जन गर्नुपर्ने कार्यदलको सु,झाव छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
कार्यदलले प्रतिवेदन शुक्रवार पार्टीका दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो । प्रति,वेदनमा सम्झौ,ता परिमा,र्जनका लागि अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग संवा,द गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सु,झाव दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रति,वेदन नआउँदै अमेरिकी प्र,तिनिधिसँग संवाद थालिसकेका छन् ।
अमेरिकी कांग्रेसका सदस्य अमी बेरा ने,तृत्वको चार सदस्यीय टोली अहिले नेपालमा छ । प्रति,निधि मण्डलसँगको बिहीवारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौ,ता केही बुदा परिमा,र्जन गर्न तयार रहेको धा,रणा राखेको नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिवार खुलासा गरेका छन् ।
नवलपुरको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा दाहालले पत्रकारसँग भने, ‘हिजो (शुक्रबार) मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई ब्रि,फिङ गर्नुभएको थियो । अमेरिकी टोलीसँग कुराकानीमा एमसीसी भनेको केही पनि चेन्ज नै गर्न नहुने, जस्ताको त्यस्ता पास गर्नुपर्ने भन्ने कुनै बा,इबल त होइन । हामीकहाँ केही कन्सर्न आए भने त यसलाई परिमा,र्जन गरेर, संशोधन गरेर पनि त लागू गर्न सकिन्छ भनेर अस्तिको दिन (बिहीबार) प्रधानमन्त्रीजीले नै बताइसक्नुभएको छ । उनीहरूले पनि त्यसलाई बा,इबल हो भन्ने कुरा आएन ।’
प्रति,वेदन सचिवालय सदस्यहरुले अब दुई दिन अध्ययन गर्ने र त्यसपछि बैठक बसेर नि,र्णय लिइने नेकपाले जनाएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘एमसीसीका विषयमा बैठकमा रिभ्यु भएको छ । नि,र्णयमा पुगिसकेका छैनौं । अर्काे बैठकबाट हामी उचित नि,र्णयमा पुग्छौं । एमसीसी स,म्झौता अ,नुमोदनका लागि सं,सद्मा दर्ता भएपनि नेकपाभित्र वि,वाद रहेका कार,ण अनु,मोदन हुन सकेको छैन । सरकारले २०७५ असार ३० गते स,म्झौता अ,नुमोदनका लागि संसद्मा प्र,स्ताव द,र्ता गराएको थियो ।